ပင်ပန်းပြီး အိပ်နေပျော် တဲ့ ချစ်သူလေး ကို ခိုးပြီးအပူချိန်တိုင်းပေးကာ ဗီဒီယိုလေး ရိုက်ပြီး အချစ်တွေပိုနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ပင်ပန်းပြီး အိပ်နေပျော် တဲ့ ချစ်သူလေး ကို ခိုးပြီးအပူချိန်တိုင်းပေးကာ ဗီဒီယိုလေး ရိုက်ပြီး အချစ်တွေပိုနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ပင်ပန်းပြီး အိပ်နေပျော် တဲ့ ချစ်သူလေး ကို ခိုးပြီးအပူချိန်တိုင်းပေးကာ ဗီဒီယိုလေး ရိုက်ပြီး အချစ်တွေပိုနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရဟိတ အလုပ်တွေ ကို နေ့မအား ညမနား ဆောင်ရွက် နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေရဲ ့နောက်ကွယ် မှာ သူမကို လိုအပ်တာတွေ ကူညီပေးနေသူ တစ်ဦးရှိ ပါတယ်နော်။ သူကတော့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ တစ်ဦးသော ချစ်သူဖြစ် ပါတယ်နော်။ ခိုင်နှင်းဝေ ဘာပဲ လုပ်လုပ် နောက်ကနေ ပံ့ပိုးပေးနေတာ ကို အမြဲမြင်တွေ့ ရပါတယ်နော်။
ခိုင်နှင်းဝေဟာ အိမ်ထောင်ရေး ကံနဲ့ အချစ်ရေး မှာ ကံမကောင်းတတ်ပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက် မှာတော့ တကယ့် အချစ်စစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီလား လို့တောင် ပရိသတ်တွေ ထင်ကြေးပေးခံ နေရပါပြီနော်။ ချစ်သူကို ရုပ်တည်နဲ့ စတတ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ တစ်ယောက် အခုတစ်ခါလည်း ဆေးထိုး လိုက်ပြန်ပါပြီနော်။
ပင်ပန်းပြီး အိပ်နေတဲ့ ချစ်သူကို ဗီဒီယို ရိုက်ပြီး ဆေးထိုးလိုက် တာပါနော်။ အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး ရဲ့ ဗီဒီယိုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
ပရိသတ္ႀကီးေရ ပရဟိတ အလုပ္ေတြ ကို ေန႔မအား ညမနား ေဆာင္႐ြက္ ေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခိုင္ႏွင္းေဝရဲ ့ေနာက္ကြယ္ မွာ သူမကို လိုအပ္တာေတြ ကူညီေပးေနသူ တစ္ဦးရွိ ပါတယ္ေနာ္။ သူကေတာ့ ခိုင္ႏွင္းေဝရဲ႕ တစ္ဦးေသာ ခ်စ္သူျဖစ္ ပါတယ္ေနာ္။ ခိုင္ႏွင္းေဝ ဘာပဲ လုပ္လုပ္ ေနာက္ကေန ပံ့ပိုးေပးေနတာ ကို အၿမဲျမင္ေတြ႕ ရပါတယ္ေနာ္။
ခိုင္ႏွင္းေဝဟာ အိမ္ေထာင္ေရး ကံနဲ႔ အခ်စ္ေရး မွာ ကံမေကာင္းတတ္ေပမယ့္ ဒီတစ္ေခါက္ မွာေတာ့ တကယ့္ အခ်စ္စစ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိသြားၿပီလား လို႔ေတာင္ ပရိသတ္ေတြ ထင္ေၾကးေပးခံ ေနရပါၿပီေနာ္။ ခ်စ္သူကို ႐ုပ္တည္နဲ႔ စတတ္တဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ တစ္ေယာက္ အခုတစ္ခါလည္း ေဆးထိုး လိုက္ျပန္ပါၿပီေနာ္။
ပင္ပန္းၿပီး အိပ္ေနတဲ့ ခ်စ္သူကို ဗီဒီယို ႐ိုက္ၿပီး ေဆးထိုးလိုက္ တာပါေနာ္။ အရမ္းခ်စ္ၾကတဲ့ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ရဲ႕ ဗီဒီယိုကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ….
Previous post ကြွေလောက် တဲ့ ဖက်ရှင် လေး နဲ့ မြင်သူတိုင်း အံသြ သင့်ဖွယ် ပုံရိပ်တွေ ချပြလိုက် တဲ့ မမဆောင်း
Next post မိလွန်း တဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်မှု ပိုလွန်း နေတဲ့ မော်ဒယ်လ် သင်းရတီခင်